I-Zapiet: Nika amandla ukulethwa nokugcinwa kwesitolo nge-Shopify | Martech Zone
Njengoba amazwe ehlukaniswa nokusabalala kwe-COVID-19, izinkampani zithwala kanzima ukugcina abasebenzi bazo besebenza, iminyango yabo ivulekile, futhi bephila. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bengisiza i- ipulazi lendawo eletha ukulethwa kwenyama e-Indianapolis Kanye nabo Thenga ukufakwa. Babenabathengisi abaningi abahlanganisa uhlelo ngaphambi kwami ​​ukuthi ngingene futhi ngangisebenza ukuqinisa ukuhlanganiswa nokwenza kahle lapho isifo sihlasela.
Ipulazi manje lisebenza ubusuku nemini ukuhlangabezana nezidingo, futhi ngibe nokuxhaswa kwami ​​ngamakhasimende okugcina kanye nabasebenzi. Babengenabo ubuchwepheshe obuzosiza futhi kwakukhona ukuhlanganiswa okuningi okwenziwa ngesandla. Kodwa-ke, ukugqama okukodwa kokufakwa kwabo kwe-Shopify kwakuyisicelo esakhiwe ngu I-Zapiet Yokulanda Isitolo Nokulethwa.
Ukuthathwa Kwezitolo Zapiet + Ukulethwa
Ngohlelo lwabo lokusebenza, ngikwazile ukudala okuhlukile izingxenye ezisuselwa kukhodi yeposi ezibeke izikhathi zokulungiselela nezinsuku zokulethwa. Sikwazile nokungeza izindawo zokugcina kumakhasimende ukuze zithathe ngqo ama-oda azo. Izikhathi zokulungiselela zivumela abasebenzi ukuthi babe nesikhathi sokuhlanganisa ama-oda, balayishe, futhi bawahambise noma bawacoshe. Esimweni saleli klayenti, babenamandla abo okuletha. Uhlelo lokusebenza luhlangana nezinye izinsizakalo zokulethwa, futhi, noma kunjalo.
Ukuhlanganiswa nenqola yakwaShopify akunamthungo, okuvumela ikhasimende ukuthi likhethe ukulethwa noma ukugcina iveni. Uma kungukulethwa, amakhodi eposi noma ama-zips aqinisekiswa njengendawo ethunyelwe kuyo futhi kunikezwa isikhethi sedethi ukukhetha usuku olufanele lokulethwa. Uma iveni yesitolo, ungathola isitolo esiseduzane. Uma unendawo eyodwa kuphela, umane ukhethe lapho ungathanda ukuthatha khona i-oda. Nakhu ukuthi kubukeka kanjani kusayithi leklayenti lami:
Inothi eliphansi: Uma uphakathi ne-Indiana futhi ungathanda ukuzama ukulethwa kwasekhaya eTyner Pond Farm, nayi i- Isaphulelo esingu-10% ku-oda lakho lokuqala!
IZapiet's Shopify App iphumelele kakhulu kangangokuba iqembu labo elixhasayo lithe bangeze ngaphezu kwezitolo eziyinkulungwane ngalesi sikhathi esibucayi. Iqembu lapho lisebenza ubusuku nemini ukusiza lawo makhasimende agibele futhi amise uhlelo lwabo lokusebenza.
Uhlelo lokusebenza luguquguquka ngendlela emangalisayo. Lapho sidinga ukuvala iveni yesitolo, kwakulula njengokuyicisha kuhlelo lokusebenza futhi singakwazi ukuyinika amandla kabusha kabusha lapho inkinga isiphelile. Siphinde sanika amandla ibha yomyalezo emnandi eza nohlelo lokusebenza, inika amandla izivakashi ezintsha ukubheka ukubona ukuthi siletha ikhodi yazo ye-zip yini.
Izici ze-Store Pickup + Delivery Faka:
Ukutholakala komkhiqizo - Maka imikhiqizo ngazinye njengokutholakala kuphela ekuthatheni, ukulethwa noma ukuthunyelwa.
Shopify ukuhlanganiswa kwe-POS - Buka, phatha futhi uhlele ama-oda akho we-Pickup kanye nokulethwa esitolo.
Yokusungula Multi-indawo - Vumelanisa futhi ubonise amakhasimende ukutholakala bukhoma kuyo yonke indawo.
Ukuphathwa kwe-oda - Bheka shazi ukuthi yimaphi ama-oda adinga ukulungiselela noma yiluphi usuku noma indawo enikeziwe.
Ukuvimbela ukukhwabanisa - Gcina ama-oda wakho ephephe kakhulu ekukhwabaniseni ngokusebenzisa isici sohlelo lokusebenza se-Security Code.
Izindawo ezingenamkhawulo - Ngenisa kalula zonke izindawo zakho futhi uziphathe ngazinye.
Ukwenza ngezifiso okubanzi - Chaza ukutholakala, ama-breakpoints, ama-offsets, i-automation, imithetho, nokuningi.
Isikhethi sedethi nesikhathi - Setha ukutholakala kwendawo nomkhiqizo kuze kube yimizuzu engu-5 futhi uvumele amakhasimende akhethe.
Kuyahambisana ngokugcwele - Hlanganisa ne-Deliv, i-Quiqup, i-Intuitive Shipping, i-Bespoke Shipping, i-Advanced Shipping Rules nokuningi. Bona konke Ukuhlanganiswa kweZapiet.
Ukusekelwa kwe-oda okusalungiswa - Guqula ama-oda asalungiswa akhona abe iveni noma ukulethwa kwama-oda.
Imikhawulo yokulethwa kokulethwa - Gwema ukweqisa ngokweqile ngokunciphisa inani lokudiliva kunoma yisiphi isikhathi esinikeziwe.
Ukuqinisekiswa kwe-Geodistance - Nikela ngokuzenzakalela inani elifanele nensizakalo ngokuya ngendawo yamakhasimende.
Futhi, uma ufuna ukwenza ngezifiso amazinga wokulethwa kwakho, iZapiet nayo inohlelo lokusebenza lwe Izilinganiso Zokulethwa Ngebanga or Izilinganiso Zokulethwa nge-Zip Code. IZapiet inikeza isivivinyo samahhala sezinsuku eziyi-14, ngakho-ke ungabheka uhlelo lokusebenza ukufanela ukuhamba kwakho komsebenzi futhi wenze okudingayo. Khansela phakathi naleso sikhathi futhi ngeke ukhokhiswe.
Faka Indawo Yezitolo Zapiet + Ukulethwa
Tags: ukulethwa lokusebenzaukulethwa kwe-ecommerce ekhayaiveni yezitolo ze-ecommercethengaThenga esitolo iveniIpulazi iTyner Pond